Rwanda: Kama aamusi karno Adoonsiga ka socda Liibiya
By Abdirazak Hayir , Garowe Online
KIGALI, Rwanda- Dowladda Rwanda ayaa ku dhawaaqday inaysan indhaha ka laaban doonin adoonsiga ka socda dalka Liibiya ee lagula kacayo qaxootiga doonaya inay u safraan qaaradda Yurub.
"Dowladda iyo shacabka Rwanda, waxay u taaganyihiin midnimada walaalaheena kale ee Afrikaanka ah iyo gabdhaheena loo haysto adoonsiga," ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaaradda Arrimaha Gudaha dalka Rwanda.
Qoraalkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in xukuumadda Kigali ay isku dayi doonto inay soo dhaweyso qaar kamid ah dhibanayaashaas, maadama aysan awood u lahayn inay dhammaantood albaabada u furto Afrikaanka kale.
"Rwanda awood uma laha inay soo dhaweyso cid kasta laakiin waxay furaynaa albaabkeena. Balse waxaan diyaar u nahay inaan si dhow ugala shaqayno Midowga Africa, Shirakaadka gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale saaxiibadeen, waxaan caawin karnaa kuwaas baahan qaar kamid ah." sidaas waxaa tiri wasaaradda Arrimaha Dibadda Rwanda.
Warbixintan laguma sheegin cadadka dadka la qaadanayo iyo xilliga uu billaaban doono qorshaha lagusoo daabulayo dadka adoonsiga loo qorsheeyay ee ku sugan dalka Liibiya. Halkan ka Akhri
Balse Guddoomiyaha Midowga Africa, Moussa Faki Mahamat, ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in Rwanda ay martigalin doonto 30 000 kun oo kamid ah Africaanka ku sugan Liibiya.
"Aad ayaan uga mahadcelinayaa dedaalka ay sameysay dowladda Rwanda, taasoo ah inay dejiso 30 000 oo kamid ah Qaxootiga Africa ee ku sugan Liibiya iyo waliba kuwa doonaya inay ku laabtaan guryahoodii." ayuu yiri Moussa Faki oo hadalkiisa kusii daray, "Waxaan sidaas oo kale inay sameeyaan ugu baaqayaa dhammaan dalalka Africa iyo dhammaan cid kastoo haysta dhalashada Africa."
14 November, 2017 ayaa telefishinka CNN baahiyay muqaal qarsoodi ah oo lagasoo duubay xarun lagu kala iibsanayo Muhaajariinta, waliba iyagoo lagu beecinayo qiimo u dhaxeeya $400 ilaa $700. Halkan ka Akhri
Isniintii Xoghayaha Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, waxa uu cambaareeyay falkan oo uu sheegay inuu yahay wax aan noociisu ka yimi dunida, isagoo tilmaamay inay tahay ficil fool xun oo ka dhan ah bini-aadanimada.
Asbuucii hore boqoolaal qof ayaa isugu soo baxay afaafka hore safaaradda Liibiya ay ku leedahay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska, waxayna ka mudaharaadayeen falkan ka socda dalka Liibiya.
"Joojiya, oo xira kaamka adoonsiga ee ku furan Liibiya," sidaas waxaa ku dhawaaqayay dadkii mudaharaadka dhigayay.
Sannad kasta boqolaal muhaajiriin Afrikaan ah oo ka tagay Galbeedka, Bartamaha iyo Bariga Qaaradan ayaa taga waddanka Liibiya iyagoo doonaya inay ka gudbaan badda Mideterian-ka si ay nolol ka wanaagsan Africa uga helaan qaaradda Yurub.
Kagame oo ku guuleystay Doorashada
Caalamka 05.08.2017. 16:18
Taageerayaasha Madaxweynaha Rwanda, Paul Kagame, ayaa bilaabay inay dabaaldegaan kaddib markii lagu dhawaaqay inuu mar saddexaad si weyn ugu guulaystay inuu xilka sii hayo.
Guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in natiijada hordhaca ah ee doorashadii madaxtinimada ee Jimcihii uu Mr ...
Agoonta xasuuqii Rwanda oo wali baadigoobaya magacyadooda
Afrika 07.04.2019. 05:36
Codsi ay Soomaaliya ugu biireyso Urur oo go’aan laga gaarayo
Soomaliya 14.06.2019. 12:03
​South Sudan oo nin ku eedaysan Tahriibinta Dadka ku wereejisay DFS
Caalamka 08.07.2017. 13:02